Tag: ala | Martech Zone
Tuzdee, Machị 18, 2008 Sunday, November 3, 2013 Douglas Karr
O doro anya na Copernicus bụ nna nke mbara igwe nke oge a mgbe ọ rụrụ ụka na heliocentrism gbasara ala. N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, anyanwụ bụ etiti nke mbara ụwa anyị, ọ bụghị ụwa. Ọ bụ nkwulu na ọ na-emegide ọdịbendị nke ndị ọkà mmụta metụtara okpukpe n'oge ahụ. Ma ọ bụ eziokwu. Itinye aka na Azụmaahịa, anyị nwere nsogbu taa. Maka ebumnuche ụfọdụ, mgbe ụlọ ọrụ buru ibu, ha
Tọzdee, Eprel 5, 2007 Fraịde, Jenụwarị 12, 2018 Douglas Karr
Ọ bụrụ na ịnweghị ụlọ ahịa na-echekwa gburugburu gị, ọ dị m nwute. Ọ bụrụ n’ị mee nke a, ị nwere ike ịmasị saịtị a nke ala bidogoro, Border Live na 01: Wow… akwụkwọ, egwu ndụ na kọfị kacha mma Seattle! Nke ahụ dị ka eluigwe maka m! O yikwara ka Akwụkwọ Ozi Email Email enwetatụbeghị, ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ịgụ ugbu a. N'ala n'ezie na-emeri agha email! Lego anya na ntụnyere a na ozi email nke Amazon: